QM oo ugu baaqday Dowladda Federalka in la xoojiyo Awoodda Garsoorka iyo Boliska, lana joojiyo Xeer Soomaaliga. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
QM oo ugu baaqday Dowladda Federalka in la xoojiyo Awoodda Garsoorka iyo Boliska, lana joojiyo Xeer Soomaaliga.
Khabiirka madaxa bannaan ee QM ugu qaabilsan xaalladda Xuquuqda Aadanaha ee Somalia, Bahame Tom Mularya Nyanduga waxa u uku baaqay Dowladda Federalka in sare loo qaado Awoodda Hay’adaha Garsoorka iyo Ciiddanka Boliska si ay gacanta ugu dhigaan fal-dembiyeedyadda kufsiga.
Khabiirka oo u dhashay dalka Tanzania ayaa hadalkaasi sheegay kadib, markii uu dhamaysto booqasho hawleed oo muddo hal isbuuc ah ku joogay Somalia, isagoo soo booqday magaalloooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, lana kulmay Guddoomiyaha Barlamaanka Federalka, Taliska AMISO, Hay’addaha QM ee Somalia, Wakiilo ka kala socday Dowlad-gobaleedyadda Jubbaland iyo K/Galbeed, Warbaahinta iyo Bulshadda Rayidka.
Khabiirka waxa uu Dowladda Somalia kala hadlay Dhowrista Xuquuqda Aadanaha, Tacadiyadda ka dhanka ah Sharafta Haweenka iyo in la yareeyo Xukunadda Dilalka.
Khabiirka madaxa bannaan ee QM ugu qaabilsan xaalladda Xuquuqda Aadanaha ee Somalia, Tom Mularya Nyanduga oo dhamaystay booqashadiisa 3-aad ee uu ku yimaado Somalia, ayaa sheegay in Xeer Soomaaliga ee Dhaqanka inuu dhibaato ku yahay Nidaamka Go’aan-gaarista ee Hay’addaha Sharciga, isla markaana uu Xeer Soomaaliga weeli door muhiim u leeyahay dadka Soomaalida.
Khabiirka waxa uu walaac xooggan ka muujiyey in maqnaanshaha Nidaamka Caddaaladda ee qeybo ka mid ah Somalia sababtay inay Odayaasha Dhaqanka Xeer Soomaaliga ku xaliyaan dembiyadda Kufsiga iyo Tacadiyadda ka dhanka ah Haweenka.
Dhinaca kale, Kabiirka waxa uu Dowladad Federalka, Barlamaanka iyo Maamul-gobaleedyadad ku ammaanay sida ay uga go’an tahay inay Doorashooyin ka dhacaan Somalia dabayaaqadda sannadkan iyo in Haweenka saami 30% laga siinayo Kuraasta Barlamaanka cusub.
Waxa uu walaac ka muujiyey inay saamiyadad Dhallinyarada, dadka la tiro badan yahay iyo kuwa naafadda aysan helin ballaanqaad ay xubno ku yeelan doonaan Barlamaanka cusub.
Madaxweynaha oo ku baaqay in Hab Dimuqraadi ah lagu soo gebagebeeyo Nidaamka Doorashooyinka soo socda.
Koox hubeysan oo Nin Ganacsade ahaa ku dilay degmada Dharkenley